နှင်းဆီရနံ့လေးမွှေးတဲ့ Rose Latte ကိုသောက်ချင်ပါသလား??? – FoodiesNavi
ရန်ကုန်မှပန်းချစ်သူများနှင့်ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပါးချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ RGN Cafe & Bistro မှာဆိုရင် Rose Latte ကိုစတင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီထဲတွင်နှင်းဆီရနံ့အရသာကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် သောက်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း နှင်းဆီအရသာသင်းသင်းလေးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီကြိုက်သူတွေအတွက် တကယ့်ကိုစိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပြီး စိတ်ကြည်လင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Rose Latte လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးကသန့်ရှင်းပြီး အရသာရှိလှတဲ့ European & Asian cuisines အစုံရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရသာရှိလှတဲ့အစားအစာကိုမှစားသုံးချင်သူတွေကို RGN Cafe & Bistro မှာသုံးဆောင်ဖို့်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ RGN Cafe & Bistro ကို No. 142 (C), Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township Yangon မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုက London နှင့် Australia ကကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအရမ်းရေပန်းစားနေတဲ့ Charcoal Latte ကအခုဆို RGN Cafe & Bistro မှာရရှိနေပါပြီ။ အခုလိုလှပတဲ့မီးခိုရောင်မှအရောင်ဆိုးဆေး သို့မဟုတ် ဓာတုဆေးဝါးများလုံးဝမပါပဲ အရည်အသွေးကောင်းပြီးကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ သန့်စင်ပြီးသားမီးသွေးမှုန့် (Activated Charcoal Powder) ကိုသုံးထားသောကြောင့် ကော်ဖီချစ်သူတွေစိတ်ချစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Activated Charcoal ရဲ့ကောင်းကျိုးများကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်များအားဖယ်ရှားပေးပြီး၊ လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်ခြင်းအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ Hangover ဖြစ်ပြီးမအီမလည်ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အခုလိုကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်ပြီး အရသာလည်းကောင်းတဲ့ Charcoal Latte ကိုသောက်ခြင်းရင်တော့ The RGN Cafe & Bistro မှာ မှာယူသုံးဆောင်လို့ရနေပါပြီ။
The RGN Cafe & Bistro မှာရရှိနိုင်တဲ့ European & Asian cuisines Menu ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုအရသာပိုင်းမှာပြောစရာမလိုအောင်ခံတွင်းတွေ့စေမယ့်ပုံပေါ်ပါတယ်။ Menu တွေကိုကြည့်ရင်းအခုချက်ချင်းအပြေးသွားပြီးစားသောက်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် variety of coffee, tea & juice တွေကိုလည်းရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပဲလာလာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲလာလာ၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေပဲလာလာ ကြည်နှုးဖွယ်ရာ စားသောက်ချိန်လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အဟာရရှိတဲ့အစားအစာကိုစားသုံးရင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
RGN Cafe & Bistro Facebook Page : www.facebook.com/rgncafenbistro/
In Restaurant Guides Tagged European & Asian cuisines, tea & juice, variety of coffee Leaveacomment
အရသာရှိလှတဲ့ Desserts မျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့….